အက်စတွန်ဗီလာနိုင်ပွဲက ဂယ်ရီနဗီးလ်တောင် ဆလံပေးလိုက်ရတဲ့ကြယ်ပွင့်ကစားသမား….. – FBV SPORT NEWS
အက်စတွန်ဗီလာနိုင်ပွဲက ဂယ်ရီနဗီးလ်တောင် ဆလံပေးလိုက်ရတဲ့ ကြယ်ပွင့်ကစားသမား…..
မန်ချက်စတာယူနိက်ကဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၁၆) ကို အက်စတွန်ဗီလာအသင်းနဲ့ အိုးထရက်ဖို့စ်ကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရာမှာ ၂ – ၁ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရခဲ့ပြီး ခြေစွမ်းကောင်းကို ဆက်လက်ထိမ်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်…
ဒီပွဲမှာဆိုးရှားလ်ဟာ ကစားကွက် ကို ၄-၁-၂-၁-၂ ပုံနဲ့ပွဲထွက်လာပြီး တိုက်စစ်ကို အသာပေးပြီး ထွက်လာတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်….
တိုက်စစ်မှာ ရတ်ဖို့ မာရှယ် ဘရူနို တို့တွဲထွက်လာပြီး ကွင်းလယ်မှာ အမာခံ ပေါ့ဘာနဲ့တော်မီနေးတို့ထွက်လာခဲ့ပြီး အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကို ပေါ့ဘာနဲ့တော်မီနေးဟာ ကောင်းကောင်းမောင်းနှင်သွားခဲ့ပါတယ်…
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းရဲ့ ကြယ်ပွင့်ကစားသမားတဦးကိုတော့ ဂယ်ရီးနဗီးလ် ကျနော်လိုနေရာမှာ ကစားပြီး ကျနော်လို့ဘဲ တောင်ပံတိုက်စစ်တွေကိုလိုက်တာ သာသွားခဲ့ပြီး ဆလံပါပေးခဲ့ရတဲ့ ကစားသမားအကြောင်းကို ယခုလိုပြောထားပါတယ်….
ဂယ်ရီနဗီးလ်က ” ဒီကစားသမားကိုတော့ ကျနော်တကယ်ဆလံပေးလိုက်ရပါပြီ ….ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူကစားတဲ့နေရာမှာ ကျနော်ကစားခဲ့တယ် ….တိုက်စစ်ကို ပံ့ပိုးတာရော ခံစစ်ကို အချိန်မီပြန်ဆင်းနိုင်တာတွေရော မှာ ဒီပွဲမှာ တော်တော်ကြီးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်..
အဲ့ဒီကစားသမားကတော့ ဝက်ဘစ်ဆာကာပါဘဲ….သူ့ကိုခနအနားပေးပြီး အခုလို အရည်သွေးတွေ ရရှိလာတာကိုလည်း ကျနော် အံ့ဩမိပါတယ်…နောက်ပြီး တိုက်စစ်ကိုလိုက်လံပံပိုးတဲ့နေရာမှာ တိကျတဲ့ဖြတ်တင်ဘောတွေ ကိုပေးနိုင်တာဆိုလို့ ယခုအသင်းမှာ သူဘဲတွေ့ပါသေးတယ်…
ဒီကစားသမားရဲ့ အနာဂတ်ကထွန်းတောက်လာအုံးမှာပါ ….ကျနော်တို့က အဖိုးကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပါပြီ….ကျနော်တို့ ဟာဒီလိုကြယ်ပွင့်ကစားသမားတွေကို ချီးမြောက်သင့်တဲ့အရွယ်ရောက်နေပါပြီ ( ရယ်လျက် ) ….သူ့ရဲ့ တောက်ပမှုတွေကို ဆက်လက်မြင်ရအုံးမှာပါ ” ဟု Metro News မှာ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်…..
FBV Sport News | Ref:Metro News